गर्भपतन चक्की सेवन गर्दा हुनसक्छ यस्तो जोखिम « Drishti News
काठमाडौं — असुरक्षित यौन सम्बन्ध वा सावधानी अपनाउँदा अपनाउँदै पनि बेलाबखत गर्भ रहन जान्छ । यस्तो अवस्थामा दम्पतीसँग दुईवटा विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ, सन्तान जन्माउने वा गर्भपतन गर्ने ? गर्भ रहनु एक सुखद क्षण हो, दम्पतीको लागि । यद्यपि यो त्यहीबेला सुखद हुन्छ जब दम्पतीले सन्तानको योजना बनाउँछन् । सन्तानको रहर पुरा गरिसकेपछिको अवस्थामा गर्भ रह्यो भने ? दम्पतीको लागि टाउको दुखाईको विषय बन्छ ।
कति महिलाले गर्छन् सेवन ?
गर्भपतन चक्कीको असर ?
यसको अत्याधिक प्रयोगले शरीरमा बनिरहेको प्रेग्नेन्सी हर्मोन प्रोजेस्टेरन प्रभावित हुन्छ । यही कारण महिलाको फर्टिलिटीमा असर पुग्छ र उक्त महिलालाई दोस्रो पटक गर्भधान गर्न समस्या हुन्छ । कतिपय अवस्थामा यो चक्की लिएपछि भ्रुण पूण रुपमा गर्भाशयबाट बाहिर निस्कन पाउँदैन । त्यसको केही अवशेष बाँकी रहन्छ ।
यो चक्की केवल ५० दिनभित्र सेवन गरिसक्नुपर्ने छ । यद्यपि कतिपयले यसलाई गर्भ रहेको तीन, चार महिनासम्म पनि सेवन गर्छन् । यसले रक्तश्राव धेरै हुने र संक्रमणको भय पनि बढाउँछ ।
खसमा यो चक्कीले शरीरमा बनिरहेको प्रोग्नेन्सी हर्मोन प्राजेस्टेरानको उत्पादन बन्द गरिदिन्छ । यही कारण भ्रुण गर्भाशयबाट अलग भएर बाहिर आउन थाल्छ साथै गर्भाशयको संकुचनले रक्तश्राव बढाउँछ । गर्भपतनको चक्कीले पेटमा अत्याधिक दुखाई हुनसक्छ ।